Maitiro Ekukwiridzira Kwangu Akaratidzwa Mifananidzo Yemagariro Midhiya Uye Kuwedzera Yemagariro Traffic ne30.9% | Martech Zone
Muvhuro, March 1, 2021 Muvhuro, March 1, 2021 Douglas Karr
Pakupera kwaNovember, ndakafunga kuyedza kugadzirisa yangu yakaratidza mifananidzo nokuti evanhu vezvenhau kuona kana zvichizobatsira. Kana iwe wanga uri kuverenga kana kunyorera kwenguva yakati, iwe unoziva kuti ini ndiri kugara ndichishandisa saiti yangu kuzviedza zvangu.
Kugadzira mufananidzo unogombedzera unogovaniswa pasocial media unowedzera maminitsi mashanu kana gumi kugadzirira kwangu chinyorwa saka haisi mari hombe yenguva… asi maminiti anogara achiwedzera uye ndinoda kungwarira kuti ndiri kushandisa nguva yangu zvine hungwaru kana zvasvika pa Martech Zone.
Ndichiri ndaingobata mamwe mafoto emasheya aive akamiririra zvemukati, ini nemaune ndakavaka mufananidzo wakaratidzwa une zvinotevera:
zera - Ndakavaka template mu Illustrator ndizvozvo 1200px yakafara ne675px kureba. Ini ndakagadzirisawo theme yangu kuratidza mifananidzo pane ino yakagadziriswa kukosha.
branding - Ini handisi kusanganisira zita resaiti asi ndinogara ndichisanganisira logo kuitira kuti igare ichizivikanwa mune angu enhau midhiya.
musoro wenyaya - Chinyorwa chinogombedzera icho hachifanirwe kugara chichienderana nezvakanyorwa pachinyorwa changu. Ini ndinogona kukwidziridza zita remushumo rekutsvaga asi nyorazve zita racho pamufananidzo wangu kuyedza kudhiraivha mamwe mabhatani.
mufananidzo - Ndine chipeto kuna Depositphotos kwandinogona kutsvaga zviri nyore ndotsvaga mienzaniso mikuru yandinogona kurodha pasi uye kuisa mukati.
Ini ndobva ndashandisa Feedpress kushandura otomatiki zvinyorwa zvangu kunzira dzangu dzevanhu. mhedzisiro ndeye tweet kana Facebook yekuvandudza iyo inomira chaizvo. Heano maitiro anotaridzika Twitter:
Dhijitari Kushambadzira Kupi Kudyisa Kwako Kwekutengesa Chitoro https://t.co/QMp6i6aq18 #martech pic.twitter.com/3o1O2D6ssB
Heano maitiro anotaridzika Facebook:
Uye on LinkedIn:
Nekuti iwo mazita akanyorwa muChirungu, ndakaongorora mwedzi mishoma yapfuura, ndikabvisa chero hutachiona, ndikadzora vateereri kuUnited States, Canada, United Kingdom, New Zealand neAustralia. Mhedzisiro yacho yaishamisa…
Mukati meGoogle Analytics, ongororo-yenguva-pamusoro-yenguva yekutsvaga kwangu zvemagariro nhepfenyuro yakaguma ne 30.9% kuwedzera mune peji rekutarisa izvo zvinouya kubva pasocial media uko yangu yakaratidzwa mifananidzo yakagadziridzwa.
Sezvineiwo, nharaunda yemagariro enhau yandinopedza nguva shoma ndichishanda pa ... peji reFacebook, yakawedzera zvakanyanya… 59.4% kuwedzera.
Hazvisi zvese zvakakwana… Ndakaona kuti yangu yepakati nguva pane peji uye mapeji pakushanya kwevashanyi vatsva aya aive pasi (asingasvike gumi%) saka ini pandiri kukwezva vamwe vashanyi, ini handisi kuita basa rakanaka mu kuzvichengeta pano.
Ndiri kuenderera mberi nekushanda nekukwiridzira saiti neimwe nzira, kunyanya ndichienda nemazana ezvinyorwa zvekare pasvondo, kugadzirisa zvimwe, kubvisa zvimwe, kuendesa zvakawanda, uye kushanda pahunhu hwese saiti. Ini ndakaisawo an zvoga shanduro basa iyo yakaona huwandu hwevashanyi hwakakwira kubva kune dzisiri mutauro Chirungu.
Iko kuedza kuri kubhadhara zvakanyanya mukutora… zvivakwa zvegore-pamusoro-gore zvemazuva makumi matatu apfuura:
Direct Traffic yakwira 58.89%
Kutsvaga kweOrganic kwakakwira 41.18%.
Yemagariro Midhiya Traffic yakakwira 469.70%
Pakazara, saiti yangu ine yakapetwa kaviri traffic yayo… iyo yandiri kufara nayo!
Unoda Rubatsiro NeYako Dhijitari Kushambadzira?
Kana iwe uchida kuongororwa kwewebsite yako nemamwe marongero anogona kuvandudza kutora kwako, inzwa wakasununguka kundibata pa DK New Media. Ini ndinogona kukuitira Audit, kupa yako timu kudzidziswa, kana kutokutora iwe semutengi kuti ikubatsire iwe kuvandudza ako edhijitari ekushambadzira mhedzisiro. Iniwo ndinonyatsoziva muWordPress saiti yekumhanyisa kana iwe uchida chaiyo magadzirirwo uye rubatsiro rwekuvandudza.
Kuzivisa: Ndiri kushandisa zvakabatana maratidziro akasiyana masevhisi mune ino chinyorwa.
Tags: yakaratidza mifananidzopasocial media mufananidzo saizimifananidzo yemagarirosocial media previewspasocial media traffic